China WiFi စမတ် ရေစိုခံ ပိုက်ပေါက် USER GUIDE စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |အိုး
Wifi ချိတ်ဆက်မှု Alexa/Google/DuerOS
နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက် အချိန်ဇယားများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
သင့်စက်ပစ္စည်းကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ထိန်းချုပ်ပါ။
အက်ပ်တစ်ခုက သင့်အိမ်ကို ထိန်းချုပ်သည်။ စက်ပစ္စည်းမျှဝေခြင်း။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-OHELE သို့မဟုတ် OEM
အာမခံ:3လ-1 နှစ် WIFI: ဟုတ်ကဲ့
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE၊ tuv လုပ်ဆောင်ချက်- Smart Home အလိုအလျောက်
စိတ်ကြိုက်လုပ်သည်- ဟုတ် ပစ္စည်း- ABS / Flame Retardant PC
ကွန်ရက်- SDK ပက်ကေ့ချ်
စိတ်ကြိုက်ပံ့ပိုးမှု- ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ထုပ်ပိုးခြင်း: 30pcs / carton
မူလနေရာ- Zhejiang၊ တရုတ် ထုတ်ကုန်အမည်- Wifi Smart Socket
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OHELE အရောင် : အဖြူ အနက်
မော်ဒယ်နံပါတ်- OHW-U၊ OHW-S၊ OHW-SR အဓိကစကားလုံး- ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်းစနစ်
အမျိုးအစား- နံရံပေါက်ပေါက် လုပ်ဆောင်ချက်- တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း။
Grounding- Standard Grounding အသုံးပြုမှု- တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: 110-250V AC အက်ပ်အမည်- Tuya APP စမတ်ဘဝ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ- 10A-16A
လျှောက်လွှာ- လူနေအိမ်/ အထွေထွေ ရည်ရွယ်ချက်
* IP အဆင့်: IP66
* အက်ပ်- စမတ်ဘဝ
* Wifi- 2.4G_WiFi
* Wifi ချိတ်ဆက်မှု
* နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက် အချိန်ဇယားများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
* သင့်စက်ပစ္စည်းကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ထိန်းချုပ်ပါ။
* အက်ပ်တစ်ခုက သင့်အိမ်ကို ထိန်းချုပ်သည်။
* မော်ဂျူးများကို လက်ခံပါ (45x45mm သို့မဟုတ် 45x22.5mm):
ယခင်- RCD + ပေါင်းစပ်ခလုတ်နှင့် UK socket 86 အမျိုးအစား ရေစိုခံသေတ္တာ
နောက်တစ်ခု: IP66 WiFi smart Home ရေစိုခံပေါက်ပေါက်
>၊ သင့်စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်သည် အင်တာနက်ပါရှိသော 2.4G WiFi နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
>၊ WiFi (SSID) ကို ဝှက်ထားရန် ခွင့်မပြုပါ။
>、 Router များတွင် “Wi-Fi squatter” သို့မဟုတ် MAC လိပ်စာကန့်သတ်ချက်များကို မသတ်မှတ်ပါနှင့်
1၊ အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
APP စတိုး သို့မဟုတ် Google တွင်ရှာဖွေ“စမတ်ဘဝ“
2 ငါf ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံမှု ပေါ်လာသည်။ APP ကို ​​ခွင့်ပြုပါ။
3, အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပြီး အကောင့်ဝင်ပါ။
4၊ စမတ်ပေါက်ပေါက်ကို ပါဝါဖွင့်ပါ။
5၊ LED ကိုသတိပြုပါအနီရောင် LED အမြန်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် (တစ်စက္ကန့်လျှင် နှစ်ကြိမ်) မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေပါက တွဲချိတ်ခြင်းမုဒ်တွင်၊ နောက်တစ်ဆင့်ကို တိုက်ရိုက်ပါ။
အနီရောင် LED သည် အမြန်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မဟုတ်ပါက (တစ်စက္ကန့်လျှင် နှစ်ကြိမ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်) အနီရောင် LED အမြန်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သည်အထိ7စက္ကန့်ကြာ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
6၊ စက်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုထည့်ရန် "+" သို့မဟုတ် "စက်ထည့်ရန်" ကိုနှိပ်ပါ။
7၊ "Electrician" -> "Socket (Wi-Fi)" ကို ရွေးပါ
8၊ သင့်အိမ်သုံး WiFi စကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းပါ၊ “Next” ကိုနှိပ်ပါ။
မေးထားသည့်အတိုင်း Next ကိုနှိပ်ပါ။
9၊ “ညွှန်ပြချက်သည် လျင်မြန်စွာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် အတည်ပြုပါ” ကိုရွေးချယ်ပါ၊ “နောက်တစ်ခု” ကိုနှိပ်ပါ။
10၊ အပြီးသတ်ပြီး စက်ပစ္စည်းအသစ်ကို အမည်ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
11၊ အောင်မြင်စွာ စီစဉ်သတ်မှတ်ပြီးနောက် ထိန်းချုပ်မှု အင်တာဖေ့စ် ပေါ်လာသည်။
1၊ စက်ပစ္စည်းအမည် 2၊ စက်ပစ္စည်းအချက်အလက်
3, AI စပီကာထိန်းချုပ်မှု
4၊ အော့ဖ်လိုင်း အသိပေးချက်
5၊ Device ကို မျှဝေပါ။
7၊ FAQ & တုံ့ပြန်ချက်
8၊ ပင်မစခရင်သို့ ထည့်ပါ။
9၊ Device Network ကိုစစ်ဆေးပါ။
10၊ စက်ပစ္စည်း အပ်ဒိတ်
11၊ စက်ပစ္စည်းကို ဖယ်ရှားပါ။
တွဲချိတ်ခြင်း မအောင်မြင်ပါက ：ထပ်စမ်းပါ သို့မဟုတ် တွဲချိတ်ခြင်းမုဒ်ကို ပြောင်းပါ။အကြိမ်များစွာ တွဲချိတ်ခြင်း မအောင်မြင်ပါက "FAQ" ကိုဖတ်ပါ
FAQ- တွဲချိတ်ခြင်း မအောင်မြင်ပါ၊ အချိန်ကုန်သွားပါသည်။
1၊ WiFi စကားဝှက်ကို စစ်ဆေးပါ၊ ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။
2၊ Router ကို ပြန်လည်စတင်ပါ၊ ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။
3၊ လိုက်ဖက်သောတွဲချိတ်မုဒ်ကို စမ်းကြည့်ပါ။
4၊ အကူအညီစင်တာကိုဖတ်ပါ သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်ကို ဖြည့်စွက်ပါ။
အောင်မြင်သောချိတ်ဆက်မှုပြီးနောက် စက်ပစ္စည်းသည် အဘယ်ကြောင့် အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်သနည်း။
အော့ဖ်လိုင်းအခြေအနေရှိပါက၊ အောက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း စစ်ဆေးပါ။
1. ကျေးဇူးပြု၍ စက်ပစ္စည်းအား ပုံမှန်အားဖြည့်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
2. စက်ပစ္စည်းသည် ပါဝါပိတ်သွားသည် သို့မဟုတ် ကျိုးနေသောလင့်ခ်ကဲ့သို့သော ကွန်ရက်ကို ပိတ်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိ၊ အွန်လိုင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိနေသည်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး 2-3 မိနစ်အကြာတွင် ပြသမှုသည် အွန်လိုင်းရှိမရှိ အတည်ပြုပါ။
3. စက်ကိရိယာတည်ရှိရာ ကွန်ရက်သည် တည်ငြိမ်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ- သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် Ipad ကို တူညီသောကွန်ရက်တစ်ခုတွင် ထားရှိကာ ၎င်းကို စက်ဘေးတွင်ထား၍ ကြိုးစားပါ။
4. အိမ်သုံး Wi-Fi ကွန်ရက်သည် ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသော Wi-Fi အမည်၊ စကားဝှက် စသည်တို့ကို ပြုပြင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ စက်ပစ္စည်းကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ အတည်ပြုပါ။
5. ကွန်ရက်အလုပ်လုပ်နေသော်လည်း စက်သည် အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်နေပါက၊ Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုများများလွန်းခြင်းရှိမရှိ အတည်ပြုပါ။Router ကို ပြန်လည်စတင်ရန်၊ ပါဝါပိတ်ပြီးနောက် စက်ပစ္စည်းကို နောက်တစ်ကြိမ် ပါဝါပြန်ဖွင့်ရန် ကြိုးစားနိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် စက်ပစ္စည်းသည် အွန်လိုင်းဖြစ်နိုင်သည်ကို သိရှိရန် 2-3 မိနစ်ခန့် စောင့်နိုင်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး ပြဿနာရှိနေပါက၊ စက်ပစ္စည်းကို ဖယ်ရှားပြီး ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ပြဿနာရှိနေသေးပါက APP အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက်တွင် စက်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပြီး တုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့ပါ၊ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် အကြောင်းပြချက်များအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများသို့ တင်ပြပါမည်။
Amazon Echo နှင့် Google အိမ်သုံးအသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
စမတ် wifi အလိုအလျောက် ရုတ်သိမ်းသည့်ပေါက်ပေါက်
စမတ် wifi ပလပ်ပေါက်
86 type 1 Gang Israel Socket ရေစိုခံသေတ္တာ
86 အမျိုးအစား 16A 1 Gang Switch +2Gang German(EU) S...
ပေါင်းစပ်ခလုတ် ၂ ခုနှင့် 13A ဘက်စုံသုံး...
RCD + ပေါင်းစပ်ခလုတ်နှင့် တောင်အာဖရိက ...
86 အမျိုးအစား2Gang German (EU) Socket